15 Ugu Wanaagsan ee Final Cut Pro Windows (2020) - Softwares
15 Ugu Wanaagsan ee Final Cut Pro Windows (2020)
Marka ay timaado tafatirka fiidiyowga, sida tafatirka dhabta ah ee loogu talagalay sameynta fiidiyoowga fiidiyowyada. Fiidiyowyo awood u leh inay beddelaan habka fikirka iyo waxa ay indhuhu u tixgeliyaan sida runta ah ee quruxda badan. Tikniyoolajiyadda casriga ah ee maanta ma aha oo kaliya inay u oggolaato qabashada daqiiqad qurux badan laakiin sidoo kale waxay ka dhigeysaa iyaga madadaalo iyo soo jiidasho. Final Cut Pro waa Mid ka mid ah acme-ka noocaas ah ee horumarka tikniyoolajiyadda maanta.
Final Cut Pro - Macluumaad Kooban
Barnaamijkan tafatirka sawirku wuxuu leeyahay waxkasta oo ah tifaftire xirfadle ah iyo in kabadan waxa isticmaale maalinle ah uu codsado. Waxaa si weyn loo isticmaalaa oo waa caan ah sababta oo ah sifooyinka ay isticmaalka soon iyo fudud. Astaamahani waxay gacan ka geysan karaan sameynta fiidiyowyo sifiican u faahfaahsan uguna qiimo badan waqtiga dadka. Oo ay la socdaan Video, waxa kale oo aad u fiicnayn kartaa audio wax ku ool ah jarida kharashka iyo waqti lumis. Adeegsiga meeshan loogu talagalay dhammaystirka fiidiyowga oo fiidiyoowyaal badan ayaa gaadhay malaayiin taageerayaal ah.
U Baahan Talooyin Kale:
In kasta oo kaamil ah gaarsiinta natiijada, iyadoo la adeegsanayo Final Cut Pro waxay leedahay saamigeeda qasaarooyinka. Ugu horreyntii, waa tiro kooban oo aalado iswaafaqsan. Final Cut Pro waxaa laga heli karaa oo keliya Mac OS kaas oo qiil loo siinayo baahiyaheeda xoogga leh ee wax ku oolka ah tafatirka xoogga leh. Haddana waxaa jira isticmaaleyaal daaqado ka badan kuwa Mac oo dhammaantood ma awoodi karaan Mac Devices.
Kordhinta ayaa sidoo kale ah qodob taageeraya baahida loo qabo Final Cut Pro kale. Software-ka ayaa la bixiyaa waana inaad bixisaa 377.88 $ waana ka baxsan tahay miisaaniyada inta badan farshaxan-yahannada tafatirka. In kasta oo loo arko maalgashi hal mar ah waxay u muuqan kartaa mid xaq ah, maadaama lagu cusbooneysiiyay bilaash. Laakiin qiimaha noocan ahi lama hadli doono isticmaaleyaasha cusub iyo soo-saareyaasha fiidiyowga ee soo kordhaya. Qiimuhu aad buu u sarreeyaa oo waxaad ku iibsan kartaa DSLR lacagtan faraha badan!
Marabtaa inaad u adeegsato iMovie Windows? Hubi Beddelada ugu fiican ee iMovie ee Windows 10 ka soo qaad qaybtayada blog-ka.
Final Cut Pro Windows Beddelka - Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Laga bilaabo baahida ugu muhiimsan ee ah in Final Cut Pro kale la buuxiyo waa in kuwani diyaar u yihiin daaqadaha. Marka la eego tiro badan oo isticmaaleyaasha daaqadaha ah, tani dhab ahaan waa mudnaan. Software-ka kale waa ka raqiisan yahay Final Cut Pro oo leh wax yar ama aan ku kala duwanayn muuqaalada. Software sidoo kale waa qalab yar oo dalbanaya waxayna leedahay faa'iidooyin u gaar ah daaqadaha. Sida kuwan oo kale ayaa wax yar ka sahlan-u-adeegsiga kuwa Mac.
Haddii aad ku cusub tahay tafatirka fiidiyowga waxayna raadinayaan softiweer inaad ka bilowdo daaqadahaaga, ama aad tahay Xirfadle. Barnaamijkan 15-ka ah wuxuu leeyahay wax kasta oo aad u baahan karto inta aad kobcinayso hal-abuurkaaga. Wax kasta oo ka fiican oo isku dheelitiran marka la barbardhigo Final Cut Pro. Adiga oo aan lahayn wax heshiis ah oo ku saabsan soosaarka hal-abuurka, iskuday kuwan beddelka ah ee Final Cut Pro.
Ma jiri karo wax ka fiican Final Cut Pro oo ka duwan tan fiidiyowga fiidiyowga ah ee fiidiyowga lagu sameeyo Adobe. Hoygu wuxuu ahaa mid aan lala tartami karin dhinacyada farsamada sawir qaadista tan iyo markii ugu horreysay ee la bilaabay. Barnaamijka tafatirka fiidiyowga ee Adobe Premiere Pro ayaa laga casriyeeyay Adobe Premiere oo la bilaabay 1991. Waxaa loo sameeyay adeegsiga Xirfadleyda kaliya, halka nooc kale oo ka mid ah barnaamijkan 'Adobe Premiere Elements' uu yahay mid loo isticmaalo shakhsi.
Barnaamijka waxaa adeegsada CNN iyo BBC. Filimada caanka ah sida Deadpool, Gone Girl, iyo terminator dark ayaa la abuuray iyadoo la adeegsanayo Adobe Premiere Pro. Waad tafatiri kartaa fiidiyowyo xallinta sare leh illaa 10,240 x 8,192 qaraarka labada RGB iyo YUV. Waxay u ogolaaneysaa 3D tafatirka, maqalka-tafatirka, iyo VSR taageerada qalabka fiilada. Dhammaan tafatirka-heerka-baahinta-baahinta iyo fiidiyow-u-habeynta daruuriga ah ayaa lagu sameyn karaa barnaamijkan.
Waxyaabaha kale ee caanka ah ee loo yaqaan 'Final Cut Pro Pro', ee Adobe Premiere Pro, ayaa soo dejin kara fiidiyaha, maqalka, iyo sawirada. Waad dhoofin kartaa fiidiyowyada adigoon wax u dhimin xallinta qaabka diyaarinta qaybinta. Ku dar saamaynta fiidiyowga, isticmaal cutubyo iyo sawirro, iskudarkooda, iyo cinwaannada inta aad tafatirka barnaamijyada ku dhexjirta barnaamijka. Waxay taageertaa tiro badan oo qaabab fiidiyow ah iyo barnaamijyo isku dhafan.
Xalka fiidiyowga ee tayada leh
Tiro badan oo ka mid ah qaabab fayl taageera
Ma jiro nooc bilaash ah, oo la heli karo oo keliya tijaabo bilaash ah
Shuruudaha qalabka dheeraadka ah
Premiere Pro Single App oo ah 6 1,675.60 / bishii
Ganacsi at300 2,300.00 / bishii
Haddii aad wax ka ogtahay barnaamijyada naqshadeynta sawirada caanka ah markaa waa inaad ku adkaataa Corel. Haddii uu jiro qof la tartamaya oo ka soo horjeeda Adobe tafatirka sawirka, hubaal waa Corel. Waxaa la sameeyay sanadkii 1985-kii shirkadan ayaa soo saartay CorelDraw softiweer naqshadeynta garaafka ah kaasoo si aad ah u caan baxay ilaa hadana aan lala tartamin. Isagoo kaashanaya garaafyada garaafka Corel wuxuu bilaabay Corel VideoStudio inuu xukumo tafatirka fiidiyowga sidoo kale!
In la eego tayada video iyo Processing, this Final Cut Pro kale ayaa si weyn loogu kalsoon yahay. Marka la barbardhigo Final Cut Pro, software-kani wuxuu leeyahay wax walba oo uu la tartamo iyo mid dheeri ah oo u taagan sidii tifaftire fiidiyow ah. Waxaad u adeegsan kartaa saamaynta sare iyo tafatirka fiidiyowga ee xallinta sare laga bilaabo 720p illaa 2610p oo leh qalab tafatir oo gaar ah.
Waxay leedahay in ka badan 2,000 + miirayaal, oo ku filan adeegsadaha xigaaga 10,000+. Waxa kale oo ay leedahay miirayaal la habeyn karo, kala shaandheyn midab ah, iyo kala guur. Waxa kale oo ay leedahay taariikhqorihii shaashadda oo aad isticmaali karto oo ay weheliso muuqaalka rikoodhka kamaradda. Waxay kaloo leedahay NewBlueFX, Boris FX, iyo ProDAD. Isticmaal Corel VideoStudio Ultimate si aad u sameysid fiidiyowyo hal abuur leh oo si xirfadaysan loo tafatiray.
2000 + Filters & qalab tafatirka badan
Tafatirka fiidiyowga ee xallinta sare
Ku kalsoon tahay oo ay adeegsadaan Xirfadlayaashu
Ma jiro nooc bilaash ah oo la heli karo
Nooca buuxa hal mar by at₹5,890
Ka cusbooneysii nooca hore ee₹4.714
Nooca tijaabada ah ee bilaashka ah ayaa la heli karaa 30-maalmood
3. Hal-abuurka Warbaahinta
Software-kani waa mid caan ah oo si weyn loogu adeegsado warshadaha filimada. Waxaa loo sii daayay 1989-kii Macintosh, iyadoo horumarro dheeraad ah ay noocyadeeda cusub sidoo kale loo sii daayay daaqadaha. Marka la barbardhigo Final Cut Pro, barnaamijkani wuxuu bixiyaa ku dhowaad tayo isku mid ah iyo qaabab sida Windows ah. Software wuxuu leeyahay naqshad dareen leh iyo fudud-interface interface. Barnaamijku wuxuu leeyahay 4 nooc waxaana loo isticmaali karaa inuu yahay barnaamij kaligiis taagan.
Beddelkan kama dambaysta ah ee 'Pro Cut Pro' waa mid waqti-hufan leh oo leh astaamo u gaar ah iyo is-dhexgal sifiican loo dhisay, laguna dhammaystiray waqti ka dib. Barnaamijka waxaa loo isticmaali karaa shaqsi ahaan iyo sidoo kale adeegsi xirfadeed. Waxaa ka buuxa dhowr qalab, sixitaan midab wanaagsan, iyo VFX. Waxaad sidoo kale tafatiri kartaa codka si aad ugu dhigto tayada fiidiyowga oo aadan u oggolaan dhawaaqa inuu yareeyo hal-abuurkaaga.
Afarta nooc ee la heli karo ayaa kala ah Media Composer First, Media Composer, Media Composer Ultimate, iyo Media Composer Enterprise. Nooc kastaa wuxuu leeyahay muuqaal kala duwan, oo ka fiican kii hore. Nooca ugu horreeya ee laxamiistaha Warbaahinta Marka ugu horreysa ayaa ugu fiican farshaxan-yahannada cusub ee fiidiyowga fiidiyowga ah maadaama ay lacag la'aan tahay oo Bixisa baahiyo fiidiyow oo aasaasi ah. Marka xigta waa la bixiyaa waxaana loo heli karaa tijaabo bilaash ah oo ah 30 maalmood.
Nooc bilaash ah ayaa la heli karaa
Nooc lacag leh oo tijaabo bilaash ah la heli karo
Naqshad fudud iyo wadaagid fudud, soo dejin, iyo dhoofin
Qiimo sare oo loogu talagalay noocyada la bixiyay
Laxamiistaha warbaahinta ee 499.99 $ / sanadkii
Ugu dambeyntiina waa 49.99 $ / Bishii
Ganacsi qiimo jaban
4. Filim sameeye
Tani waa tan ugu fiican ee loo yaqaan 'Final Cut Pro' ee daaqadaha waxaana laga heli karaa dukaanka Microsoft. Waxaad ku sameyn kartaa fiidiyow adoo adeegsanaya sawirro, clips, iyo muusig barnaamijkan. Tani software tafatirka software waa mid caan ah ka mid ah dadka isticmaala daaqada sababta oo ah daaqadaha ay fudud user-interface.
Hawlaha sida ku soo biirista fiidiyowga, muusigga asalka ah, iyo qoraalka qoraalka ayaa loo samayn karaa si loo xoojiyo fiidiyowyadaada barnaamijkan. Astaamaha sida shaandhada muuqaalka, macaamil ganacsi, iyo saameynta zoom ayaa lagu dari karaa sidoo kale. Hawlgalku waa dhakhso oo hayaa xasilloonida iyo xallinta sare ee fiidiyowga fiidiyowga. Waxaad ku dari kartaa muusikada raadadka la dhisay ama soo dejinta faylkaaga.
La doorbidayo ujeedooyin shaqsiyadeed, waxay leedahay laba nooc. Moviemaker 10 waa nooc bilaash ah oo wuxuu siiyaa dhammaan sifooyinka tafatirka fiidiyowga lagama maarmaanka ah. Halka Moviemaker Pro uu hubaashii yahay Final Cut Pro kale oo loo adeegsan karo Xirfadle. Nooca Pro waa la bixiyaa oo wuxuu u oggolaanayaa helitaanka astaamo dheeri ah iyo fiidiyoo fiidiyow oo tayo fiican leh. Farshaxan farshaxan fiidiyowga baranaya, abkan wuxuu noqon karaa bar bilow fiican.
Nooca bilaashka ah ee daaqadaha
Astaamaha aasaasiga ah ee nooca bilaashka ah
Deggan, dhakhso leh, oo hufan
Muuqaalka xaddidan ee nooca bilaashka ah
Laguma talin in loo isticmaalo Xirfadleyda
8,99 $ hal mar oo qiimo iibsi ah
Beddelkan Final Cut Pro wuxuu bixiyaa wax ka badan Final Cut Pro. Software-ka wuxuu u ogolaanayaa sameynta, tusaalaynta, farshaxanimada, animation, iyo khayaanada oo ay weheliso tafatirka fiidiyowga. Muuqaalka fiidiyowga ee fiidiyowga ah wuxuu u oggolaanayaa tafatirka aasaasiga ah sida fiidiyowyada iyo kala-goynta. Software-ka wuxuu kaloo oggol yahay isku-darka maqalka inuu dhammaystiro fiidiyowga tayada-sare leh.
Xirfadda maqalka, waxay u oggolaaneysaa xoqidda, isku dhejinta, iyo muuqaalka muuqaalka muuqaalka. Marka laga reebo sameynta fiidiyowga aasaasiga ah, waxay taageertaa astaamaha fiidiyowga adag ee fiidiyowga ah sida Maska duubista iyo kala-soocidda midabka. Barnaamijka waxaa adeegsada kuwa sameeya ciyaarta, farshaxan animation, s iyo naqshadeeyayaasha garaafka. Waad maamuli kartaa xawaaraha, waxaad ku dari kartaa kala guurka, miirayaasha, iyo keyframes.
Tifatiraha fiidiyowga wuxuu la yimaadaa qalab iyo astaamo sida horudhaca Live, luma waveform, chroma vectorscope, iyo muujinta histogaraam. Waxaad isku mar ka wada shaqeyn kartaa 32 fiidiyow oo kala duwan maadaama ay la socoto 32 boos. Kaliya maahan fiidiyow laakiin sidoo kale sawirro, maqal, waji-qarsoodi, iyo saameyn. Beddelkan kama dambaysta ah ee loo yaqaan 'Pro Cut Pro' waa Trouville maadaama ay bilaash tahay in la isticmaalo oo Waxay bixisaa in ka badan inta badan loo isticmaalo tifaftirayaasha fiidiyowga ee bilaashka ah.
Lacag la'aan, adeegsiga nolosha oo dhan
Isku xirnaanta isticmaale-saaxiibtinimo
Ugu horayn maahan tafatirka fiidiyowga
Beddelka ugu dambeeya ee loo yaqaan 'Pro Cut Pro' ayaa loo heli karaa daaqadaha. Tifatirahaan fiidiyowga ah, macnaheedu waa, waa u tartame awood badan oo loo yaqaan 'Final cut for' iyo xitaa ka mid ah Final Cut Pro. Tifatiraha ayaa u oggolaanaya tafatirka fiidiyowga aasaasiga ah iyo xawaare dhakhso leh oo lagu amaano. Waxaa ku jira in kabadan 50 saamayn iyo kala guur si loo hubiyo tafatirka hal abuurka.
Si loo siiyo tartan xoog leh barnaamijka softiweerka ah waxay u oggolaaneysaa Tifatirka iyo dhoofinta feylasha 3D iyo 360 faylal fiidiyoow ah. Waxay taageertaa qaabab fara badan oo Fayl ah waxayna leedahay qalab maqal ah oo la dhisay si loogu bixiyo fiidiyowyo leh maqal tayo sare leh. Isku xirnaanta adeegsigeedu waa mid fudud oo u oggolaanaya tafatirka iyo soo dejinta fiidiyowyada adoo jiidaya oo soo dhacaya.
Barnaamijka tafatirka fiidiyowga ayaa u oggolaanaya wadaagista iyo gubashada qaababka DVD-ga si loo fududeeyo wadaagga. Waad hagaajin kartaa-hagaajin kartaa midabka, xawaaraha xakamaynta, oo waxaad samayn kartaa xasilinta fiidiyowga. Waxa kale oo aad abuuri kartaa fiidiyowyo wareegsan oo aad ku dhoofin karto fiidiyowyo xalka sare oo u dhexeeya 4k ilaa 720p iyo in ka badan. Noociisa bilaashka ah ayaa loo heli karaa adeegsi aan Xirfad lahayn, isticmaalka macaamiisha. Adeegsiga Xirfadleyda, waad iibsan kartaa nooca lacagta lagu bixiyo.
Tafatirka fiidiyowga oo fudud oo fudud
Tiro badan oo kala guur ah
Nooc bilaash ah oo loogu talagalay isticmaalka shakhsi ahaaneed
39.95 $, hal mar lacag bixin
Beddelka ugu dambeeya ee loo yaqaan 'Pro Cut Pro' waa mid u gaar ah kuwa kale maaddaama aysan tani ahayn barnaamij software ah laakiin ay tahay aalad fiidiyoow ah oo fiidiyow ah Beddelka aaladda fiidiyowga ee fiidiyowga ah, tan ayaa laga yaabaa inay dib u dhacdo wax yar oo loogu talagalay Xirfadleyda. Laakiin isticmaalka maalinba maalinta ka dambeysa, sida ugu fiican ayuu u shaqeeyaa.
Tafatirka video aasaasiga ah sida midowdo, cadaadin, cabir, slideshow, iwm lagu samayn karaa online on site this. Markaad booqato goobta waxaad kaheleysaa aalado aasaasi ah oo lagu soo bandhigay bogga hore. Baadhitaan dheeri ah, waxaad kaheli kartaa astaamo dheeri ah oo bixin kara Fiidiyowyo Youtube diyaar ah oo hufan.
In kasta oo barnaamijyada macaamiisha ama barnaamijyada macmiilku aanu bixin boggan. Weli waad ku rakiban kartaa barnaamijkeeda daaqadaha 10. Si aad u rakibto, fiidiyow uga fur Microsoft gees. U kaco ellipsis taagan oo u gudub barnaamijyadooda. Barnaamijyada guji 'ku rakib boggan sida barnaamijka' oo guji ku rakib sanduuqa wada hadalka ee barnaamijyada. Waa la soo dejin doonaa waana la maamuli karaa bilowga. Tani waxay sahlaysaa helitaanka astaamaha iyo aaladaha si fudud.
Bilaash in la isticmaalo
Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa telefoonka
Tafatirka fiidiyowga aasaasiga ah
Ma jiro barnaamij u gaar ah daaqadaha
8. Xallinta DaVinci
Kale software tafatirka video caan ah waxaa loo isticmaalaa Professional video tafatirka. In kastoo loo adeegsado Xirfadleyda waxay leedahay naqshad adeegsi fudud oo dhakhso leh. Ha noqoto adeegsadeyaal cusub ama xirfadlayaal duug ah barnaamijkan wuxuu bixiyaa astaamo iyo tayo labadaba. Softiweerku wuxuu cadeynayaa aaladaha ugu badan ee looga baahan yahay wax ka bedelida hal meel, taas oo aan ahayn kiiska barnaamijyo kale oo badan oo caan ah.
Isku-darka hagaajinta midabka, saameynta muuqaalka, iyo sawirada dhaqdhaqaaqa ee hal software ayaa ka hortagaya hoos u dhaca tayada fiidiyaha. Qalabka ku jira softiweerkan waxaa loo isticmaalaa tifaftirka filimada. Qalabkan waxaa adeegsada midableyda xirfadleyda ah, tifaftirayaasha, iyo farshaxanka VFX.
Noockeedii ugu dambeeyay, waxaad kuheleysaa Wide Gamut HDR, jiir, iyo tafatirka kumbuyuutarka ku saleysan. Mashiinka codka leh ee waxqabadka sare ayaa lagu daray oo awood u leh inuu taageero 2000 maqal oo ku shaqeeya nidaam. Waxay leedahay tiro badan oo kala guurka, video saamaynta, iyo cinwaanka, s, iwm Tani Final Cut Pro kale uu leeyahay naqshad cajiib ah oo waa la heli karaa sida a version lacag la'aan ah oo la bixiyo labada.
Nooc bilaash ah oo leh astaamo lagama maarmaan ah oo la heli karo
Qalab dheeraad ah iyo astaamo
Cusbooneysiin joogto ah
Khibrad isticmaale qallafsan
Nooca Bilaashka ah
DaVinci Xalliyo Studio 17 at, 25,900
Tani kale Final Cut Pro waa doorasho ku habboon sida ay u daboosho labada faa'iido darrada la Final Cut Pro. Marka hore, tani waa software tafatirka fiidiyowga lagu sameeyay 2004 ee Windows taas oo ka dhigaysa mid la jaanqaadaysa aaladaha baahida. Ta labaad, softiweerkani waa barnaamij furan oo fiidiyoow ah oo fiidiyoow ah oo macnaheedu yahay inay bilaash u tahay soo dejin iyo adeegsi.
Software-kani runtii waa aalad iskutallaab-madal fiidiyoow ah. Waxay taageertaa noocyo badan oo ah qaab qaab warbaahineed, maqal, muuqaal, iyo koodhadh ah. Softiweerku uma baahna soo dejin sidaa awgeedna wuxuu u oggolaanayaa tafatirka hooyo oo leh jadwallo qaabab kala duwan leh, qaraarro, iyo qaab xaddidan.
Waxay u oggolaaneysaa shaashadda, webcam, iyo qabashada codka waxayna taageertaa xallinta ugu badnaan 4k. Waxay leedahay interface fudud, abaabulan, iyo user-saaxiibtinimo. Waxay heshaa cusbooneysiin joogto ah. Waxay leedahay kala guur, fiidiyoowga fiidiyowga, iyo tafatirka maqalka aasaasiga ah. Ahaanshaha barnaamij il-furan waa gabi ahaanba bilaash sidaa darteed waxay ku habboon tahay bilowga inay isku dayaan. Xitaa Xirfadlayaashu waxay u isticmaalaan xirfadahooda sare si ay uga helaan waxa ugu wanaagsan ee barnaamijkan kumana niyad jabaan.
Meel furan oo bilaash ah in la isticmaalo
Taageerada qaabab badan
Loogu sameeyay daaqadaha tani waa xulasho kale oo la door biday sida Final Cut Pro kale. Waxaa markii ugu horeysay la abuuray 2005 waxaana si aad ah loo isticmaalaa tan iyo markaas. Software wuxuu bixiyaa tafatirka tayada on your videos. Software wuxuu taageeraa inta badan qaabab video iyo tafatirka, soo degida, dhoofinta iyaga ku jira. Waxa kale oo ay u ogolaataa 3D tafatirka.Si aad u dhigay ka dhanka ah kale kale ee Final Cut Pro iyo software laftiisa, waxay leedahay tiro badan oo qalab.
Waxay leedahay miirayaasha Fiidiyaha NEWBlue, saamaynta fiidiyowga ee ProDAD, iyo VST dhejiyeyaasha maqalka ee loogu talagalay xoojinta maqalka. Iyadoo la adeegsanayo isla mar ahaantaana ah fiidiyowyo 4k ah, sixitaanka midabka iyo miirayaashan ayaa sida ugufiican uga hela software-ka. Software-ka wuxuu leeyahay barnaamij Mync ah oo la xoojiyay oo gilgiliya abaabulka, wadaagida clips, iyo faylasha warbaahinta.
Sida Final Cut Pro kale, waxay taageertaa Range Dynamic High in fiidiyow adeegsade-saaxiibtinimo u fudud oo hufan. EDIUS waxay ubaahan tahay maalgashi hal mar ah oo la adeegsado noloshaada oo dhan. Markaad iibsato waxaad heleysaa casriyeyn bilaash ah oo joogto ah waxaadna heleysaa rukhsad joogto ah markaad iibsaneyso oo aad u isticmaali karto intaad nooshahay. Waxaad heli kartaa nooc tijaabo ah oo 30-maalmood ah si aad khibrad ugu hesho barnaamijka oo aad naftaada u go'aansato.
Hal mar maalgashi.
Shatiga isticmaalka nolosha
30-Maalmood nooca tijaabada ah ayaa la heli karaa
Tani waa software kale tafatirka video caan ah. Qalabkan fiidiyowga ah ee fiidiyowga fiidiyowga ah wuxuu kugu qalabeeyaa qalab fara badan si loo abuuro fiidiyoowyo cajaa'ib leh. Waxay leedahay naqshad dareen leh oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay si fudud ugu dhex maraan softiweerka. Waa qalab fiican oo loogu talagalay bilowga ah ee tafatirka fiidiyowga iyada oo adeegsigeedu yahay mid saaxiibtinimo.
Waad tafatiri kartaa fiidiyowyo xallinta sare leh illaa 4k qaraar. Waxay taageertaa qaabab badan oo fiidiyoow ah sida MP4, AVI, FLV, MKV, iwm oo ay weheliso qaabab maqal ah sida MP3, WAV, M4A, iwm Sawirada sidoo kale waxay taageertaa tiro badan oo qaabab ah. Waxay leedahay astaamo muhiim ah sida xakamaynta xawaaraha, Goynta Video, kala-baxa, isku shaandheynta, isku-darka iyo dalagga, gadaal, sawirka sawirka, iyo raad-socodka dhaqdhaqaaqa.
Beddelkan kama dambaysta ah ee loo yaqaan 'Pro Cut Pro' wuxuu kuu oggolaanayaa wadaagista sahlan ee fiidiyowyada wax laga beddelay. App wuxuu kuu ogolaanayaa geliyaan warbaahinta bulshada, gubi in DVD, iyo waafaqid macruufka iyo Android. Software-kan waxaa lagu heli karaa bilaash daaqadaha. Waad dooran kartaa nooca lacagta lagu bixiyo si aad uhesho astaamo dheeri ah sida cusbooneysiinta bilaashka ah, ma laha wax calaamadeysan oo leh astaamo dheeri ah.
Nooc bilaash ah ayaa la heli karaa.
Astaamaha aasaasiga ah ee muhiimka ah ee lagu heli karo nooca bilaashka ah.
Tiro badan oo qaabab fayl ah ayaa la taageerayaa.
Laguma talin xirfadlayaal.
Ma oggolaaneyso tafatir fara badan hal mar.
Nooca lacag bixinta ee $ 7.99 / bishii
Beddelkan kama dambaysta ah ee loo yaqaan 'Pro Cut Pro' waxaa ka buuxa waxyaabo badan oo badanaa ay adeegsadaan farshaxanno Video ah oo hal meel ku wada jira. Waa la-qabsi software ah oo loogu talagalay qalloocinta iyo qalabka 3D oo ay weheliso tafatirka fiidiyowga. Software-ka wuxuu leeyahay qalab wax lagu raadsado oo muuqaal balaaran leh. Software-kan wuxuu adeegsadaa qaar ka mid ah tikniyoolajiyadda ugu caansan adduunka sida aaladda BorisFX ee Pro tilting.
Software wuxuu leeyahay ururinta aaladaha fiidiyowga fiidiyowga aasaasiga ah sida nuqul, goyn, iyo jeex, iwm oo ay weheliso aaladaha aasaasiga ah waxay leedahay urur u gaar ah qalab gaar ah, aaladaha codka ugu fiican, iyo aaladaha animation-ka. Muuqaalka ka dhigaya midka ugu fiican ee loo yaqaan 'Final Cut Pro Pro' ayaa ah inay taageerto fiidiyowyada xalka 8k. Sidoo kale xawaaraha dhoofinta degdega ah iyo 32-bit midab sabayn dhibic leh.
Waxay bixisaa Nidaam dhakhso leh iyada oo la adeegsanayo nidaamkeeda GPU-ga ah. Bixiyeen qalabka loo baahan yahay sida Intel GPU barnaamijka softiweerka ah marka la isticmaalo wuxuu noqon doonaa mid deg deg ah oo siman. Waxay taageertaa wax ka badan celceliska qaababka warbaahinta waxayna ku habboon tahay qaabaynta VFX iyo 3D oo leh muuqaal qoraal ah oo xoog leh. Waxay sidoo kale leedahay xasiliyaha fiidiyowga iyo fure chrome si looga dhigo mid ka wanaagsan sidii hore.
Tilmaamo iyo qalab tayo fiican leh
Sidoo kale software VFX weyn
Kufiican isticmaalka Xirfadlaha
Qalab awood leh ayaa loo baahan yahay
Demo Bilaash ah oo leh astaamo xaddidan
Software dhameystiran hal mar ku iibso $ 209.40
13. Qiiqa Autodesk
Barnaamijkan Beddelka ah ee 'Final Cut Pro' wuxuu bixiyaa tafatirka waqtiga-ku-saleysan iyadoo la adeegsanayo aalado. Tafatirka jadwalka-udub-dhexaadka ah ayaa u oggolaanaya kaamil ahaanta fiidiyowga faahfaahinta ugufiican daaqad walba. Waxay kuu ogolaaneysaa iskudhafka node ku saleysan inuu kuu ogolaado inaad si fudud wax ugu saxdo adigoon ka bixin aragtida waqtiga.
Waad soo dejin kartaa oo aad abuuri kartaa joomatari 3D ah iyo qoraallo, ku dar cinwaanno 3D ah fiidiyahaaga adoo adeegsanaya barnaamijkan. Jarida firfircoonaanta waxay ku siineysaa xakameynta waqtiga iyo xawaaraha. Software wuxuu leeyahay celcelis ahaan qaab file file taageero. Beddelkan kama-dambaysta ah ee Pro wuxuu leeyahay hoos u dhac ah in loo heli karo Mac iyo Linux oo keliya.
Barnaamijku wuxuu leeyahay celcelis ahaan shuruudaha qalabka wuxuuna si fiican ula shaqeeyaa 4GB RAM iyo Intel core audio. Barnaamijkani wuxuu la yimaadaa tiro badan oo fiidiyoow ah si loo isticmaalo iyo qalabka kor u qaadista fiidiyowga. Nooca tijaabada ah ee bilaashka ah ayaa la heli karaa iyada oo ay weheliso nooca la bixiyay. Way kufiicantahay adeegsiga Xirfadlayaasha mana ahan kuwa bilowga ah maadaama qalabka tafatirka ay adagyihiin.
Tilmaamo tayo sare leh
Ku habboon xirfadlayaasha
Lama heli karo daaqadaha
Kaliya loogu talagalay Mac iyo Linux
Isku-xidhka isticmaalaha ee isku-dhafan
Nooca Tijaabada Bilaashka ah
Nooc buuxa oo laga soo dejisto $ 1,620
Tani waa il-furan software tafatirka video ku jira liistadan. Waxay leedahay qaababka loo isticmaalo sida Final Cut Pro kale. Waxaa loo heli karaa Mac, Linux, iyo windows. Waa tifaftire fiidiyoow iskutallaab ah. Software-ka waa fududahay in la isticmaalo dadkuna si dhakhso leh ayey u bartaan maadaama ay leedahay adeegsade-adeegsade fudud.
Waxaad samayn kartaa oo dhan video tafatirka aasaasiga ah ee software sida jajabinta, goynta, iyo jar. Iyada oo ay weheliso aasaaska, waxaad nooleyn kartaa waxyaabo nolosha u keena fiidiyowyada. Barnaamijka wuxuu kuu ogolaanayaa lakabyo badan oo loogu talagalay astaamaha, fiidiyowga, raadadka maqalka, iwm. Waad MAAKEYN kartaa hagaajinta midabka oo aad ku dari kartaa saamaynta fiidiyowga inta aad isticmaaleyso barnaamijkan.
Waad arki kartaa maqalka sida mowjadaha oo xitaa waxaad ku dari kartaa fiidiyowyadaada. Saameynta ay weheliso waxaad ku dari kartaa cinwaanno, waxaad bixin kartaa cinwaanno animated 3D ah iyo saameyn. Waxay leedahay fududahay in la isticmaalo interface waxayna u oggolaaneysaa ku darista fiidiyowyada in wax laga beddelo jiita iyo hoos u dhac. Waad xakamayn kartaa waqtiga, samayn kartaa xawaaraha fiidiyowga si dhakhso ah ama gaabis ah, adigoo dhexgalaya is dhexgal hufan.
Isha furan iyo bilaash
Dhammaan sifooyinka aasaasiga ah ee la heli karo
Astaamaha sida tan tifaftirayaasha fiidiyowga ah ee caymiska.
Ma jiro muuqaal dheeri ah
The ugu dambeeya ee liiska Final Cut Pro kale, software this waxaa weli mar kale loo isticmaalaa si ballaaran u soo jeedin Professional. Waxaa loo adeegsaday filimo badan sida Wolf of wall street, Pulp Fiction, King’s speech, iwm. Barnaamijka softiweerka ee sanadka 2020 wuxuu ku yimaadaa xirmo ay ku jiraan wax walboo laga yaabo inuu u baahdo inuu abuuro, wax ka beddelo fiidiyowyo ujeeddo kasta ha lahaadee.
Waxay leedahay naqshad fudud oo kaamil ah sannado badan oo ka-jawaab celinta isticmaaleyaasha iyo is-hagaajinta. Waxay u oggolaaneysaa tafatirka jadwalka bilaa dadaalka iyo goynta iyo tafatirka fiidiyowyada xalinta 4k. Waxaad si toos ah ugu dhoofin kartaa youtube ama Vimeo adigoon wax qiimo jabin ah ku lahayn qaraarka 4k.
Waxay taageertaa tiro badan oo qaabab warbaahineed ah waxayna u oggolaaneysaa saxnaanta 32bit GPU. Markaad soo dejiso waxaad heleysaa liisanka 7-maalmood oo bilaash ah si aad ugu isticmaasho nooc tijaabo ah. Haddii aad u aragto inay tahay mid sax ah 'Final Cut Pro', waxaad sidoo kale iibsan kartaa waxyaabo cusub oo kala duwan oo leh waqti kala-qaadasho. Si aad ugu cusbooneysiiso Pro, waa inaad isdiiwaangelisaa oo waxaad heli doontaa marinnada aaladaha loo isticmaalo sameynta, wax ka beddelka filimada.
Caan ah oo si fudud loo isticmaali karo
Tijaabo 7-maalmood oo bilaash ah ayaa la heli karaa
Laguma talin in bilowga ah
$ 24.99 / bishii
Final Cut Pro shaki la'aan waa barnaamijka ugu wanaagsan ee fiidiyowga fiidiyowga ah, waa sababta dadka isticmaala daaqadda ay ugu baahan yihiin beddelaad barnaamijkan. Laakiin waxay leedahay qayb ka mid ah liidashada iyo wax run ahaantii ugu fiican abid yimaado lacag la'aan, haddii ay dhacdo Final Cut Pro, la awoodi karo!Sidaas kuwan kale ee Final Cut Pro waa waxa yimid la awoodi karo, xaaladaha qaarkood xitaa bilaash ah oo leh agabyada iyo agabyada ugu wanaagsan ee ugu dhow. Muhiim maahan inaad iibsato Mac si aad u sameyso xirfad-yaqaan ama tayo-sare leh fiidiyowga fiidiyowga. Waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa mid kamid ah softiweerkan aad awoodid iyo dabcan xirfadaha.
Marka la fiiriyo nashqaddooda ku habboon ee adeegsadayaasha xitaa waxaa suurta gal ah inaadan u baahnayn xirfad kasta oo shardi u baahan. Software-kan wuxuu fursad u siinayaa hal-abuurkaaga isagoon ka welwelin tayada ama lacagta. Bilow oo malaha xitaa iskuday dhammaantood! (ugu yaraan kuwa bilaashka ah)
Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo:
S. Ma jiraa nooc daaqado ah oo loo yaqaan 'Final Cut Pro'?
Sanado.Waqtigan xaadirka ah, Maya. Laakiin marka la eego baahida iyo caan ka mid ah softiweerka mid ayaa laga yaabaa in la sii daayo mustaqbalka. Taas ka sokow, waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo lagu beddeli karo sida qalimaanta hoos ku taxan oo keena natiijooyin tayo isku mid ah. Waxaad isku dayi kartaa qaar ka mid ah daaqadaha caanka ah ee tafatirka softiweerka sida Adobe ama Corel si aad u hesho khibrad Final Cut Pro-like ah.
S. Ma jiraa nooc bilaash ah oo loo yaqaan 'Final Cut Pro'?
Sanado.Ma jiro nooc bilaash ah oo loo yaqaan 'Final Cut Pro' laakiin waxaad u isticmaali kartaa bilaash 90 maalmood oo ah nooc tijaabo ah. Waxaad ka heli kartaa khibrada buuxda iyo fikrad sax ah oo ku saabsan barnaamijka ka hor intaadan go'aansan inaad iibsato. Maxkamad 90-maalmood ah ayaa kuugu filan adiga inaad go'aansato haddii ay u qalanto ama aad haysato wax alla wixii aad ka heli lahayd nooca bilaashka ah.
S. Sidee ku heli karaa Final Cut Pro ee daaqadaha bilaash?
Sanado.Jawaabta fudud oo dhameystiran ee su’aashan waa, ma awoodid. Laakiin waa inaadan niyad jabin maadaama aadan xitaa ku heli karin bilaash Mac. Laakiin waxaad heli kartaa barnaamij fiidiyow oo fiidiyow ah oo bilaash ah oo bixin kara natiijooyinka ugu fiican ee hal-abuurkaagu abuuri karo isla markaana desktop-kaaga ayaa ku soo ururin kara qalabkiisa. Mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee bilaashka ah, Final Cut Pro kale ee daaqadaha ayaa loo yaqaan'hot '.
Beddelka Garageband-ka ugu Fiican
10 Best iTunes Beddelka
garaac soo saaraha barnaamijka bilaashka ah
muxuu sameeyaa sanduuqa tvga android
user amazon aan ogaaday in user showtime a
ugu fiican Streaming tv online lacag la'aan ah
sidee i iibsato Netflix
xbox codes xubin dahab nool oo lacag la'aan ah aan la isticmaalin